10 Ozuzu Ọzụzụ Nkụzi & Nkwekọrịta maka ọganihu ọrụ gị Ọ BỤ
Usoro Ọzụzụ Ọzụzụ na Nkwekọrịta
1. Solaris 11 Management System Ed 5 NEW
2. Nchịkọta Nchebe Oracle 11 Oracle Ed 2
3. Orazi Solaris 11 Advanced System Administration Ed 5
4. Nchịkọta data 11g database: Ntọala Nchịkọta Data na 2
5. 11G database Oracle: Atumatu nchịkwa m wepụ 2
6. Oracle Database 12c: Nchịkwa
7. Oracle 11G R2 New Akụkụ
8. Data Nzuzo 11g: Advanced PL / SQL
9. Data Nzuzo 12c: Advanced PL / SQL
Ntọala Oracle bụ ngwakọta nke ozi a na-ewere dị ka otu. Ihe kpatara nchekwa data bụ ịchekwa ma chekwaa data metụtara ya. Ihe nkesa nchekwa data bụ ụzọ isi na-elekọta nsogbu nke nchịkọta data. Niile niile, ihe nkesa na-adabere na ya na otutu ozi na multiuser ngalaba nke mere na ọtụtụ ndị ahịa nwere ike nweta oge ahụ. Nke a dị mma mgbe ọ na-eziga elu. Ihe nkesa nchekwa data na-atụ anya ka ndị a na-enweghị mmasị nweta ma nye azịza dị irè n'ihi mmechuihu.
Oracle Database bụ nchekwa data dị mkpa maka nnukwu ụlọ ahịa azụmahịa, nke kachasị mma na ego savvy nso iji lelee data na ngwa. Nhazi usoro mmepụta matrik na-eme ka ọdọ mmiri na-arụ ọrụ-ọkọlọtọ, ikike zoro ezo na sava. Site na injinia a, enwere ike inye ngwa ngwa ọ bụla site na ọdọ mmiri nke akụkụ. Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji rụọ ọrụ arụ ọrụ, ebe ọ bụ na oke nwere ike itinye ma ọ bụ gbanwere ya na mmiri ọdọ mmiri dị ka achọrọ.
Ihe nchekwa data nwere akụkụ dịgasị iche iche na akụkụ anụ ahụ. Ebe ọ bụ na akụkụ ahụ na nke nwere ọgụgụ isi dịpụrụiche, enwere ike ịchọta ihe ọmụma nke anụ ahụ na-enweghị isi na-emetụta ọnụ ụzọ nke ụlọ a na-ahụ maka nchekwa. A na-enye ụfọdụ n'ime Ọzụzụ Ọzụzụ Oracle na Asambodo n'okpuru:
Nchịkọta nchịkwa Oracle Solaris 11 System na-ekpuchi usoro zuru ezu nke usoro nhazi nzukọ na Oracle Solaris 11.3 OS. Isi ihe ndị a na-enweta site na ịmepụta nhazi ọrụ na ntọala nkịtị, iji chọpụta ma chọpụta ihe dị mkpa. Ebum n'uche usoro nchịkwa Oracle Solaris 11 maka inye ndị nduzi ọhụụ ọhụrụ, ma gbalịsie ike ka ndị ọrụ ọhụrụ dị ọhụrụ na usoro Oracle Solaris 11, na aptitudes ha nwere iji rụọ ọrụ ọrụ ha n'ụzọ dị irè ma na-arụpụta nke ọma.
Mee mmemme mmepe na mmemme nhazi upgrades.
Chọpụta nlekọta, usoro ma nweta njikwa.
Dezie nchịkọta akụkọ, mpaghara, usoro na ndị ahịa.
Usoro a na-etinye aka na-enye aka maka ọrụ maka ihe omume agbakwunyere isi na ebumnuche nke ịmepụta ọrụ ndị isi na-akwado.
Nchịkọta nchịkwa nchịkwa a na nchịkwa Oracle Solaris 11 na-enyere gị aka ịzụlite mmụta na ikike iji gbanwee nchebe na usoro Oracle Solaris 11. Master Oracle University educators ga-enyere gị aka nyochaa njirimara nchedo ọhụrụ abanye n'ime Oracle Solaris 11.1 na Oracle Solaris 11.2; ch op uta ot 'ue si eji ihe ndi a eme ihe iji belata nsogbu nke nkwụsị ma chebe ma ngwa ma ozi.
Na-egosipụta ụkpụrụ nchebe dị egwu na ọganihu.
Njikwa ndị ahịa nwere nchedo, jide ikike, akwụkwọ na ihe ndekọ.
Mee nchịkwa ederede, dozie nchedo, nchebe mpaghara na akara nche.
Dezie nchebe na nlekọta.
Idebe ihe ndekọ ihuenyo na oge nchebe.
Mgbe ị na-ahapụ usoro a, ị ga-ahapụrịrị nghọta nke ọma nke Oracle Solaris 11.2 security organization na ọhụrụ upgrades mere Os. Nke a na - enye gị ohere ịme ihe kachasị gị rịọ ka ị na - eme ngwa ngwa na nzuzo, ọkara na ọkara, ma ọ bụ na - emeghe. Usoro a ga - enye aka nyere gị aka ịme ndokwa nchebe, mgbe ị na-emejuputa na ịlele nchebe na usoro Solaris 11.
Zulite Solaris 11.2 OS ọkachamara
Omume a na - agbasawanye na ngosiputa usoro a na - akụzi na Oracle Solaris 11.2 System Administration. Ị ga-arụ ọrụ na ndị nkụzi Oracle University maka ịzụlite nghota zuru oke nke usoro Oracle Solaris 11.2 nchedo nke ị nwere ike imetụta n'ọrụ gị kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na i nweghị nzukọ nzukọ Oracle Solaris 11, ị ga-ebu ụzọ nweta nchịkwa Oracle Solaris 11 System na Oracle Solaris 11 Advanced System Administration na mbụ iji kwado mmụta mmụta siri ike nke nzukọ Oracle Solaris 11 kpugoro tupu ị gbalịsie ike were usoro a siri ike. Ndị nwere nsogbu na Oracle Solaris 10 kwesịrị iji Usoro Omume ahụ gaa na Oracle Solaris 11, ebe ọ na-agbasawanye na Oracle Solaris 10 mmụta ma na-enye ọzụzụ maka omenala ọzọ dabara na ahụmịhe gị.
Ọganihu nchịkwa nchịkwa Oracle Solaris 11 Advanced System a na-enye aka na arụ ọrụ nke usoro Oracle Solaris 11.3. Ị ga-amatakwa echiche ndị na-agba ọsọ na ịhazi ihe site na ngwakọta nke ihe nkuzi na ọrụ aka nke ga-eme ka mmụta gị sie ike.
Chọpụta nlekọta na njikwa ochichi na-eji SMF.
Ịnyocha usoro mmemme site n'iji IPS mee ihe.
Gaa ala ma weghachite ozi tinye n'ọrụ ZFS.
Hazie usoro na usoro dị elu.
Lelee nlekọta nhazi.
Idebe 11 os Oracle Solaris.
Mee ka 11 OS Oracle Solaris X dị iche iche.
Mee usoro nhazi na ọrụ mgbaàmà.
Mepụta ihe omuma, ngwa ngwa ngwa ngwa na nghota karia nke nzukọ Oracle Solaris 11.3 na mmezi ohuru emere os, nke nyere gi ohere igbanye akwukwo ndi ozo choro na nzuzo, okara na okara, ma obu ndi ozo.
Zulite Solaris 11.3 OS ọkachamara
Omume a na - agbasawanye na ngosiputa usoro a kụziri na Oracle Solaris 11.3 System Administration. Ị ga-arụ ọrụ na ndị nkụzi Oracle University na-akụzi ihe iji wuo nyocha dị omimi nke Oracle Solaris 11.3 OS nke ị nwere ike ịmetụta n'ọrụ gị kwa ụbọchị.
Biko Rịba ama: Nke a bụ Ọganihu dị elu
Nke a bụ usoro dị elu nke na-adaba na isi ihe gbasara mmasị ịhazi na ịhazi usoro Oracle Solaris 11. Ọ bụrụ na i nweghi nzukọ nzukọ Oracle Solaris 11, ị ga-ebute usoro nchịkwa usoro nchịkwa Oracle Solaris 11 ka ị nwee ike ịchọta ihe ịga nke ọma nke nzukọ Oracle Solaris 11. Ndị nwere Oracle Solaris 10 nwere ike iji Usoro Nwegharị na Oracle Solaris 11, ebe ọ na-agbasawanye na ozi Oracle Solaris 10 ma na-enye ọzụzụ ndị ọzọ omenala dabara na ahụmịhe gị.
4. 11 Oracle Oracleg: Ụlọ Nche Data Hapụ 2
Ebe nchekwa nchịkwa a nke 11: Nchịkọta Data Management Administration 2 na-enyere gị aka ịzụlite ikike iji Oracle Data Guard iji hụ na gị Oracle database megide ndokwa na-ezighị ezi. Nyochaa otu esi etinye data data nchekwa Data Data iji mee ka ikike ịmepụta ihe, dịka ọmụmaatụ, ịkwusa, ịjụ ajụjụ na ule, mgbe ịnọ na njikere.
Ịzụ ahịa azụmahịa dị elu chọrọ ka usoro ọzọ
Nkwado nkwado na-achọ usoro ọzọ
Wụpụta ụlọ ọrụ na-enweghị ike ịnweta ya
Gwa ngwa ngwa, siri ike, dị ala ma dị mfe ilekọta mmegbu. Mee ka ọrụ nchekwa data dị elu, mee ka ụgwọ IT na-akwụ ụgwọ ma gosipụta usoro nlekọta dị elu site n'inwe ike ịdị n'otu na ngwa ngwa n'ime Datacenter gị.
Ụlọ Ọrụ Nhazi Data
Usoro a na-enyocha Data Guard engineering, nhazi nke ntanetịime nchere anụ ahụ na nke nwere ọgụgụ isi na akụkụ na-akpali. Ndị nkụzi nkụzi ga - enyere gị aka nyochaa njirimara Oracle Data Guard 11g, gụnyere Oracle Active Data Guard na ebe nchekwa data echere.
5. 11 Oracle Oracleg: Ụlọ Ọrụ Nchịkwa M Hapụ 2
Ihe omuma a nke 11G: Nchịkwa nchịkwa m wepụtara 2 ịga na-achọpụta ihe dị mkpa nke nkwekọrịta nchekwa data. Master Oracle University ndị nkụzi ga-eme ka isiokwu dị ike site na iji aka eme ihe ndị ga-eme ka ị dịrị maka nyochaa nyocha Oracle Certified Associate.
Gosipụta Nhazi Igwe Nzuzo.
Mee na ilekọta ndị ahịa.
Gwa ma mepụta Oracle Database.
Mee na ilekọta ụlọ ndị na-ere ákwà.
Chọpụta Oracle Database.
Nyochaa engineer data Oracle na otu esi arụ ọrụ ya ma kwurịta ya.
Mee nkwado na mgbake.
Gwa ngwa ngwa, siri ike, dị ala ma dị mfe ilekọta mmegbu. Mee ka ọrụ nchekwa data dịkwuo mma, weta ụgwọ IT ma gosipụta ụdị nlekọta dị elu site n'inyere ike na ngwa ngwa jikọtara n'ime Datacenter gị.
Mepụta Nchịkọta Ọrụ
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-achọpụta otú ị ga-esi rụọ nchekwa data na arụmọrụ n'ụzọ ziri ezi na akụkụ dịgasị iche iche na ụzọ dị mma ma dị mma. Nke a na-agụnye nyocha ịchọrọ, nchebe nchekwa data, nlekọta ndị nlekọta na nkwado / mgbake.
Ụlọ Ahịa Oracle 11G: Nchịkọta Ọchịchị M wepụtara Mmasị 2 na-egbo mkpa ọzụzụ maka Ụzọ Ntuziaka Oracle. Naanị onye nkụzi na-ebugharị na weebụ (LVC, LWC), na klas (ILT) ma ọ bụ ọzụzụ On Demand ọmụmụ na-egbo mkpa ahụ. Ọ bụrụ na ị chọghị ileba anya na ọmụmụ ihe nke Onwe-gi na Ọmụmụ Ihe Ọmụma ihe omumu anaghị egboju mkpa ọzụzụ.
The Oracle Database 12c: nchịkwa nchịkwa ga-egosi gị gbasara usoro nhazi Oracle. Ị ga-achọta otu esi emeso ihe ọmụma Oracle Database nke ọma, mepụta Oracle Network Environment ma mee nkwado ndabere data. Na nke a, ị ga-amata Oracle Database Cloud Service.
Mee ma zoo usoro Oracle Database.
Mee na ilekọta Ngwongwo Nchekwa.
Chepụta gburugburu ebe obibi Oracle.
Nyochaa nchekwa data na ilekọta igbu egbu.
Mụta ihe ndị dị mkpa banyere nkwalite na usoro mgbake.
Jiri Oracle Support Workbench na My Oracle Support iji kwalite usoro nhazi Oracle gị.
Chọpụta nghọta nke Ọrụ Oracle Database Cloud Service.
Ekwenye na ngwa ngwa, na-atụkwasị obi, dị ala ma dị mfe ilekọta mmegbu. Ihe ndekọ data na streamline, mee ka ụgwọ IT na-efu ma gosipụta ọdịdị dị elu nke nlekọta site n'enye ike n'otu nchekwa na nchekwa data.
Soro Aka-Na Omume na Ihe ngosi
Ntuziaka ndu na ngosi aka ga-enye gị ezigbo ahụmahụ. Site n'ikere òkè na mmemme aka iji mee ka mmụta gị dịkwuo ike, ị ga-emepe ịchọta ihe ndị ị ga-eji na-arụ ọrụ site na ịntanetị Oracle.
Nke a Oracle Database 11G: Nchịkwa nchịkwa Nwepụ 2 N'ezie na-achọpụta ihe dị mkpa nke isi nchekwa data nzukọ, gụnyere otu esi ewepụta ma na-edebe ihe Oracle nchekwa data. Chọpụta banyere injinia na otu esi arụ ọrụ nchekwa data ma na-akpakọrịta. Mee nkwado ma weghachite ma nyochaa ma mezie ozi ndaputa. Chọpụta ezigbo nchekwa data dị ka ebe nchekwa, mkpocha na akụ itinye n'ọrụ Oracle Database 11g.
8. 11 Oracle Oracleg: Advanced PL / SQL
Na usoro Oracle Database 11G Advanced PL / SQL, ndị nkụzi Oracle University ga-enyere gị aka nyochaa atụmatụ dị elu nke PL / SQL iji mee atụmatụ na pịa PL / SQL. Ị ga-achọpụta otú ọ ga-esi jikọta nchekwa data na ngwa dị iche iche na ụzọ kachasị nke ọma.
Ejiri usoro nke PL / SQL nakweere usoro.
Mee PL / SQL ngwa na itinye nchịkọta.
Emebe ihe nchekwa nchekwa nke onwe gi na mma-grained inweta akara.
Dee ederede na interface na mpụga C na ngwa Java.
Dezie koodu na interface na mkpesa dị ukwuu ma jiri SecureFile LOBs mee ihe.
Dezie ma dee PL / SQL koodu nke ọma iji mepụta mmegbu.
Mee ka abamuru nke ederede SQL di na ederede PL / SQL ka edezie koodu ngwa. Nke a ga - enyere gị aka ịghọta uru zuru oke nke iji usoro kachasị mma.
Akaụntụ nke Onwe n'onwe
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-amata Personal Database (VPD) iji mepụta nchedo. Mụta nkà na ngwa ngwa iji mee ka ngwa dị ike megide mwakpo infusion SQL. Nyochaa mmemme mmemme, itinye n'ọrụ nke mpụga C na Java, PL / SQL server peeji nke na mma-grained ga-esi.
Usoro Nchịkwa Oracle nke 12c: Advanced PL / SQL ọzụzụ na-egosi gị otu esi eji ọrụ dị elu nke PL / SQL mee ihe na kọọ / PL / SQL ka ịdebe na nchekwa data na ngwa dị iche iche. Master Oracle University ndị nkụzi ga-enyere gị aka nyochaa atụmatụ ndị dị elu nke nhazi usoro, bundles, cursors, interface interface na nchịkọta.
Dee ihe omume PL / SQL dị mma.
Nyochaa mmezi mmemme.
Jiri mpụga C na usoro Java.
Tinye PL / SQL ịmebatara usoro.
Dee koodu na interface na n'èzí C na ngwa Java.
Dee ederede na interface na nnukwu ajụjụ ma jiri SecureFile LOBs.
Dezie na tune PL / SQL koodu site na iji gbasaa mmegbu.
Chọta otu esi ede usoro PL / SQL nke na-enyocha ngwa PL / SQL ma debe usoro ndị nwere ike ịmekwu egbu. Site na itinye ihe onwunwe n'ime usoro a, ị ga-amata Personal Data Database (VPD) iji mepụta ndokwa nche ma nyochaa usoro na ngwaọrụ iji wusi ngwa gị megide mwakpo infusion SQL. Na-emepụta ihe omume site na ịmepụta PL / SQL omume na C na koodu Java.
Ntuziaka nke ụbọchị a na MySQL 5.6 usoro na-ekpuchi atụmatụ ọhụrụ niile na ntinye ọganihu ndị ọzọ na MySQL 5.6 na MySQL Enterprise Edition, gụnyere igbu egbu, ime mgbanwe, ịnweta na ume. Master Oracle University educators ga-eme otu ihe ahụ na-edu ndụ demos.
Ụmụ akwụkwọ ndị nwere ike ịrite uru na usoro a:
Ndị ahịa ọhụrụ nke MySQL, bụ ndị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị n'oge gara aga na itinye aka na nchịkwa nchekwa data.
Ndị MySQL nọ na-adị ugbu a bụ ndị na-achọ ịchọta ihe ọhụrụ bara uru conceivable na MySQL 5.5 Release
Dezie ntinye gị iji ihe mySQL 5.6 mee ihe niile.
Nchịkọta Ụlọ Ahịa na Gurgaon | Ndekọ data na Gurgaon